राजनीतिक सहमतिबिना चुनाव गराउनुहुन्न ( नायिका विपना थापा) - [2006-01-28]
अधिकांश सिनेकर्मीहरू र्समर्थनमा तर, चर्चित नायिका विपना थापा सरकारले गराउन लागेको नगर चुनावको विपक्षमा - राजनीतिक सहमतिबिनाको चुनाव रक्तपातपर्ूण्ा हुन्छ भनेर उनी यसको विरोध गर्छिन् । राजनीतिमा रुचि नभए पनि राजनीतिक परिवारमा हुर्केकी उनी खारिएको राजनीतिक 'गफ' गर्छिन् ।
सहकर्मीहरू चुनावको पक्षमा रहेको बेला तपाईँले चुनाव स्थगन गर्नु पर्छ पो भन्नुभयो, किन ?
चुनावले झन् द्वन्द्व बढाउँछ । देशको नागरिकका साथै कलाकार पनि भएकोले जनचेतना जगाउने जिम्मेवारी ममा पनि छ । समस्या समाधानको दिशामा जानुपर्नेमा रक्तपात निम्त्याउने खाल्डोतिर जानुअघि सोच्ने कि ! सोच्नुको अर्थ हो, वार्ता गर्नु । चुनाव प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएपनि राजनीतिक सहमतिबिना अहिले चुनाव गराउनु भनेको रक्तपात निम्त्याउनु हो ।
चुनाव भएमा भोट हाल्न नजाने त ?
अहँ, म त जान्न । म राजा विरोधी हैन, र्समर्थक हुँ । सरकारले के बुझनर्ुपर्छ भने कसको लागि चुनाव गराउन लागेको हो । जसको लागि चुनाव गराउन लागेको हो ऊ नै सुरक्षित रहने अवस्था छैन भने चुनावको के औचित्य - त्योभन्दा त केही समय पर्खेर सबैको सहमतिमा चुनाव गराए राम्रो हुन्छ ।
त्यसो भए राजाले के गर्नुपर्ला ?
राजाले जनहितको निम्ति जनचाहना अनुसार चल्नर्ुपर्छ । हतियार बोकेर हिँडेका पनि हाम्रै दाजुभाइ हुन् । घरमै गोलीको शिकार बनिरहेका निशस्त्र पनि हाम्रै दिदीबहिनी हुन् । त्यसैले समस्या समाधान द्वन्द्वले भन्दा वार्ताको माध्यमबाट गर्नर्ुपर्छ ।
प्रसङ्ग बदलौँ, सिने क्षेत्रमा आफ्नो एक दशकलाई कसरी लिनुभएको छ ?
पहिलेको तुलनामा धेरै विकास भएको छ । स्तर बढेको छ । नयाँमा भन्दा अहिले निकै आत्मविश्वास बढेको छ ।
तर एक दशकअघिका चलचित्र स्तरीय मानिन्छन् त ?
पहिले समाज त्यति विकसित थिएन । वर्षदिनमा बन्ने एक-दर्ुइ चलचित्रलाई सबैले महत्त्व दिएर हर्ेर्थे । यसो भन्दैमा त्यसबेलाका चलचित्र नराम्रो भन्न खोजेको हैन । अहिलेका केही चलचित्र नराम्रा भए पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रा बढी छन् । यथार्थ र जिवन्त अभिनय पाइन्छन् ।
कतिपय चलचित्र मौलिक नभई अरुको नक्कल गरिएको आरोप छ ?
नेपाली दर्शकले मौलिकता वा नेपालीपन भन्दा पनि बलिउड, हलिउडका जस्तो स्तरीय चलचित्र खोज्छन् । विदेशी चलचित्रसँग दाँजेर उताको जस्तो नयाँपन खोज्छन् । तर विदेशमा जस्तो लगानी हामीकहाँ हुँदैन । सीमित साधनस्रोतको भरमा मेहनत गरेर राम्रै दिन खोजिरहेका छौँ ।
धेरैले भन्ने गरेको 'कथाले मागे जति अङ्गप्रदर्शन गर्छु भनेको के हो ?
मैले त्यस्तो भनेको छैन । अङ्गपर््रदर्शन हाम्रो संस्कार, संस्कृतिमा अटाउने हुनर्ुपर्छ । कथाले सुहागरातको वा बच्चालाई दूध खुवाएको दृश्य माग्ला रे, त्यही गरेर देखाउन जरुरी छैन । सुहागरात के हो भन्ने सबैलाई थाहै छ । त्यस्तो कुरा 'सिम्वोलिक' देखाउँदा भइहाल्छ । कथाले मागे जति गर्छर्ुुन्नु मर्ूखता हो । कथाले त जे पनि मागिदिन्छ नि !
घरजम गर्ने बेला भएन ?
केटी मान्छेको बिहे गर्ने उमेर २५ देखि ३० हो भन्ने मान्यता मेरो परिवारमा छ । त्यही बीचमै गर्नुपर्ला । गत वर्षेखि बिहे गर्ने दबाब आइरहेको छ । तर अझै एक वर्षबिहे नगर्ने ।
बिहे 'लभ' कि 'एरेञ्ज' गर्ने ?
भाग्य हो कहाँ, कोसँग हुन्छ भन्न सकिन्न । अहिलेसम्म त एरेञ्ज नै हुन्छ जस्तो छ । मन मिल्ने भेटियो भने लव म्यारिज पनि हुनसक्छ । अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो भेटेकी छैन ।